Ikhabethe Yemibala Yekhishi Inhlanganisela - Kitchen Cabinets Color Combination
Home Ikhabethe Yemibala Yekhishi Inhlanganisela
Ikhishi liyiphuzu elibaluleke kakhulu lokuhlangana ekhaya lakho; zombili zokweneliseka kwakho kanye nokuthengisa kabusha. Ngakho-ke ukukhetha i-shading efanelekile yekhabethe lakho lasekhishini kubalulekile. Amaningi ahlela kabusha noma akhethe amapulani wephansi afaka ekhishini endaweni evamile, futhi kaningi ayikho ikhishi / izifunda zokudla / zezindawo ezithile. Ukwenza ukukhetha kwe-bureau shading kube ingxenye esemqoka ekubekeni isimo senqondo nokwenza injabulo endaweni yakho ebalulekile yokuphila. Noma ngabe kunjani, ukukhetha umthunzi ofanele ekhishini lakho kunzima kakhulu kunokuba umuntu angakulindela. Lokhu kuqhuba njalo abanikazi bezindawo ukuthi bakhethe iVanilla.
Kungani Kufanele Ucabangele Ukusebenzisa Umbala Ongewona owama-nonpartisan wamakhabethe akho
Abantu abanempahla yokubamba imvamisa bayanqikaza ukucabanga ngokungathathi hlangothi (Ngizokwenza ibhulogi ngokuhamba kwesikhathi ngendlela efanelekile yokukhetha ukungalingani ngokungafani nobandlululo lwekhabethe lekhishini) ngoba bayasabeka. Ziyehluleka ikakhulukazi ngamakhabethe ekhishi ekhishini ngenxa yokubaluleka kwekhishi elingavamile ukuthengisa ikhaya. Ngempela, ikhishi umcabango oyinhloko wabathengi.
Abathengisi bavame ukucabanga ukuthi ngamathuba wokuthi benze ikhaya labo libandakanyeke kakhulu ukuthi kuzoba nomdlandla owengeziwe ngalo. Ukucabanga okujwayelekile kungancenga ukuthi abathengi abangaba ngaphezulu kwalokho isilinganiso eshibhile kakhulu esizotholwa ngumthengisi. Kunoma ikuphi, akunaki ukucabanga ngobuningi beminikelo efinyelelekayo emakethe esebenzisa le ndlela efanayo esekwe. Iqiniso lendaba ukuthi ukungalawulwa kubhekisa ukuthi ngenkathi kusazoba nesisekelo esithe xaxa sabathengi abangaba khona kuzoba nezinketho ezifanayo.
Isakhiwo esihle uhlelo olukhulu; futhi ukhumbula ukuthi ama-hues ahlukahlukene azokhuluma ngabantu abancane azokhuluma nalabo bantu ngokwezinga eliqine kakhulu. Ngokunjalo futhi uzoba nanenzuzo yokwenyuka uvukele noma yiziphi izinketho ebuchosheni balabo bantu; futhi leyo yindlela othengisa ngayo ikhaya lakho ukuthola okwengeziwe.
Okubaluleke kakhulu ukuthi uyalithanda ikhishi lakho ngakho-ke khetha umthunzi futhi ugcwalise okunika amandla. Zibekele ukwenza lokho abanye abangenjalo nakanjani. Zonke izingxenye kufanele zithuthuke ekuqondisweni kwenhloso yesakhiwo esiqinile. Ukuhleleka okuhle kuhlangene nokuphuma ngomlenze, ukushayela indlela, nokushaya ngesifiso sakho sesitayela sakho uqobo.
Amaphuzu athakazisayo Lapho ukhetha Umbala Wekhishi Lekhishini
Ezimweni eziningi sisho ukuthi “indlu ikhetha umjondolo” futhi ukukhetha okuhle kakhulu kwe-shading kuya ngokuya ngokulahla umthunzi, kunoma yisiphi isikhathi lapho kuqala inqubo.
Cabanga ngezinto ezingeke ziguqulwe. Mhlawumbe uthandisisa umkhondo wakho wamanje / ukufafaza emuva kanye nemishini yokungena noma unezinto ezenziwe ngamatshe noma umsebenzi wezitini endlini yokuxhuma. Kufanele ukhethe umthunzi ozoncoma lokhu kufakwa okungashintshi. Kufanele wazi ngomthelela wokuthi ukukhanya kwegumbi kuzoba nomthunzi othulayo. Ingabe ukukhanya kwesimilo?
Imisakazo? I-Fluorescent? Ukuhlanganiswa okubili? Ukukhanyisa kuzoba nomthelela wokuthi umjiko ubonakala kanjani, futhi ukubukeka kuzoshintsha ngokufanayo nobude bosuku nobusuku njengokuhlanganiswa kwezinguquko zokukhanya.
Qhubeka njalo wenze indlela yokungena ukuze ikunikeze isigameko esikhulu sokudluliswa komthunzi.
Okwamanje kungenzeka ukuthi uqonde ukuthi enye yezindlela ezivelele kakhulu zokushintsha kakhulu ikhishi lakho (futhi kusukela ekubukeni okuhlukahlukene kwekhaya lakho) ngezindleko ezinengqondo ukupenda amakhabethe ekhishi lakho. Kwakuhlukile eminyakeni eyi-10 ngaphambi kokuthi amakhabethe ama-maple ne-oki acatshangelwe kahle kwakuyisinqumo esaziwa kakhulu nokho ukupenda izinkomishi zepulasitiki kusheshe kuphenduke okujwayelekile.
Siphinda siqale kabusha amakhabethe ekhishi amakhulu (kanye nezinkomishi zokugeza, nokunye) eCleveland, OH zone kanye nolunye lwemibuzo esaziwa kakhulu esiyitholayo luyinto ethunisa ukukhetha. Nayi ingxenye yamamodeli wethu esiwathandayo (konke okuvela emsebenzini wethu) eceleni kokucaciswa ukukunika amandla ekukhetheni okulungele ikhaya lakho. Uma ungakhathazeki ukukhumbula kabusha, lapho ukhetha noma yimuphi umthunzi wokupenda ongama-hues amaningi ahlukene egumbini elinomthelela kulokho okubukeka kungcono kakhulu. Ukufiphaza okukodwa kungahle kubonakale kungakholeki ekhishini lomunye umuntu okwamanje kungekokwakho.
Amakhabethe Wekhishi Elimhlophe
Okumhlophe kusenzima njengamanje umjondolo owaziwa kakhulu njengoba kwenzekile kunoma yisiphi umcimbi iminyaka emihlanu noma kwenye indawo eseduze. Isizathu esisodwa esimhlophe ukuthi umfudlana ojwayelekile ususisekelo sezisekelo ukuthi wenza iningi lama-hues ahlukene ekhishini pop, (ngokwesibonelo, abahlukanisi kanye nezinto zokubala). Amakhabethe amhlophe opendiwe angenza ukuthi ikhishi elincanyana libukeke likhulu njengokupenda abahlukanisi okungenza ukukhanya kube lula.
Amakhabethe eGrey / Cream Edwetshwe
Isithunzi sesibili esivamile kunazo zonke yi-grey noma ukhilimu. Emakhayeni amaningi umthunzi omhlophe ophezu kwamakhabethe ekhishi angaba ubukhazikhazi ngokweqile. Lesi yisimo njalo uma izinsalela zoxhaxha endlini zingwevu noma uma okokubala noma okungaphansi kwekhishini kusohlangothini olufudumele lobubanzi be-shading. Isibonelo, uma kwenzeka ukuthi izinto zakho zokubala zibe nethoni yamathoni anemibala emnyama noma ephuzi, ngaleso sikhathi ukumiswa kompunga kungaba yinto yokuncoma eyingqayizivele.
Imisebenzi ye-shading iyathandeka (futhi ibukeka igqamile) kule ekhishini ngenxa yama-hues ahlukile. Njengoba abahlukanisi bungumthunzi oluhlaza okotshani bese i-backsplash inethoni yamathoni anemibala emnyama, lokhu kufiphaza okumpunga kubancoma kahle.
Upende Wekhishi Amakhabethe Grey
I-Dim ingumndeni owaziwa kakhulu ngokufaka umthunzi we-divider, kepha ingabe yi-shading engcono kakhulu yamakhabethe ekhishi lakho? Ngempela yisinqumo esivelele nokho kungenzeka ukuthi ‘sithandwa’ kakhulu kunokumhlophe nokumhlophe. Ngokufana nanganoma yikuphi ukugoba kuncike ngempela kokusasele kokuhlobisa kwakho njengamaphansi nezihlalo. Ukukhanya okufiphele nokufiphele kumnyama zombili kudume ngamakhabethe. Ukukhanya okukhanyayo kungabukisisa ikakhulukazi kumakhabethe amancanyana kuphela, ngokwesibonelo, ukudweba kwesiqhingi noma kumane nje amakhabethe aphansi ashunqayo.
Amakhabethe ekhishi aluhlaza okwesibhakabhaka
Uma kwenzeka ukuthi manje unethoni yokufiphala nokumhlophe ekhishini lakho, okunye okungahle kumangalisa ukudweba amakhabethe akho kungaba yinto eluhlaza okwesibhakabhaka eluhlaza okwesibhakabhaka. Lokhu kungahle kusetshenziswe engxenyeni yamabhodi ezinkomishi kunasinye sazo kodwa kungaba yinto yokugcizelela emnandi nephuzu lokuhlangana. Lokhu akungabazeki ukuthi akuwona wonke umuntu futhi ngeke nakanjani aziwe ngeminyaka eyi-5 noma ngakho-ke esikhathini samanje (ngonyaka we-2018) kuyindlela ehlukile yangempela.
Imibala eluhlaza okwenziwe amakhabethe ekhishini
Ukukhetha okukodwa kokugcina komthunzi okubonisa umthunzi oluhlaza. Njengomkhosi wamasosha omatilosi okwesibhakabhaka, lokhu kuyindlela ekhethayo eyengeziwe esebenza yodwa ezindlini ezithile. Lokhu kuthungatha kungasebenza ezindlini ngawo wonke amathoni afudumele ngokwengeziwe, ngokwesibonelo, amathunzi e-beige. Ngaphezu kwalokho kungenzeka kakhulu isebenza kahle nge-grey grey ecebile kunokuba ibe mhlophe ngokusobala.
Ngokufanelekile lo mbhalo ubangela ukuba udwebe umsebenzi wakho wokudweba amakhabethe ekhishini Kukhona amathani ezinye izindlela ezingavamile ezitholakalayo futhi ezingcono kakhulu kuwe ezethembele ekunambithekeni kwakho nakwizihlobo ezihlukile ekhishini lakho. Uma kwenzeka uhlala endaweni yaseCleveland, singathanda ithuba lokukhuluma nawe ngokupenda amakhabethe ekhishi lakho. Ungajwayela inqubo yethu ekhasini lethu lokupenda leKhabhinethi.